कस्तो अचम्म : श्रीमती आफूभन्दा अघि हिँडेको भन्दै श्रीमानले गरे सम्बन्धविच्छेद « Light Nepal
कस्तो अचम्म : श्रीमती आफूभन्दा अघि हिँडेको भन्दै श्रीमानले गरे सम्बन्धविच्छेद
Published On : 11 September, 2017 11:11 am
By : लाइट नेपाल
साउदी अरबमा निकै स–सानो कुरामा सम्बन्धविच्छेद दिने चलन लगातार बढिरहेको छ । नयाँ मामलामा साउदीका एक व्यक्तिले आफ्नी श्रीमतीसँग यसकारण सम्बन्धविच्छेद गरे किनभने उनकी श्रीमती उनीभन्दा अगाडि हिँडिरहेकी थिइन् ।
स्थानीय मिडियाका अनुसार श्रीमानले थुप्रै पटक आाफूभन्दा अगाडि नहिँड्न श्रीमतीलाई चेतावनी दिएपनि श्रीमतीले उनको भनाई नमानेपछि उनीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका हुन् । यद्यपी, अहिलेसम्म यी व्यक्तिको पहिचान हुन सकेको छैन ।
अर्का एक मामलामा हनिमूनमा गएका एक जोडीको पाउजु लगाउने विषयमा कुरा नमिल्दा सम्बन्धविच्छेद भएको थियो । श्रीमतीलाई पाउजु लगाउन चाहन्थिन् तर श्रीमान भने त्यस्तो चाहँदैनथे । यस्तैमा अर्को एक मामलामा एक श्रीमानलाई श्रीमतीको कुरा गर्ने शैली मन नपरेपछि सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए ।
साउदीमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा तीब्र वृद्धि भएपछि अब प्रशासनले विवाहित जोडी विशेषगरी नवविवाहितका लागि काउन्सिलिङ सेवा सुरु गर्ने माग गरिँदै छ । साउदीमा विवाह गराउने एक व्यक्ति हुमूद अल शिमारीका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा तिब्र वृद्धि भइरहेको छ । अल शिमारीले यसका विभिन्न कारण बताए तर आधुनिक प्रविधीलाई सबैभन्दा ठूलो दोषी बताइयो ।
१४ घण्टासम्म लगातार सम्भोग गर्न सक्ने जीव !
मेलबर्न । अस्ट्रेलियामा पाइने मस्र्युपाइल प्रजातिको जीव सेक्स (शारीरिक सम्पर्क)लगत्तै मर्ने गरेको पाइएको छ ।
दुबईमा करोडौं पर्ने कार त्यत्तिकै छोडेर हिड्छन मान्छेहरु, सरकारलाई भयो टाउको दुखाई
एजेन्सी । विलासी कार किन्ने सपना जोकोहीले देखेको हुन्छ । तर यूएईको दुबईमा वर्षौंदेखि संसारका
“मेरो भर्खरै बिहे भएको हो श्रीमतीले मलाई खुप याद गरेकी छन्” भन्दै सिपाही मनोजले विदा माग्न यस्तो पत्र अफिसरलाई पठाएपछि हाँसो थामीएन अफिसरको !
एजेन्सी। एक प्रहरी जवानले विचित्र आवेदन लेखेर पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा ब्यापक सक्रियता देखाइरहेका छन्
आँगन खन्दा भेटियो देख्दै सातो जाने बस्तु, त्यो भित्र खोलेर हेर्दा झण्डै ढलेनन् यि बुढाबुढी
एजेन्सी । विरुवा रोप्नका लागि आफ्नो घरको गार्डन खन्दा भेटिएको थोत्रो बाकस खोलेर हेर्दा दम्पती
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेका नेता
पूर्वएमालेले आफ्नो भागका २४१ जना केन्द्रीय
सुरु भयो दिल्लीको खेल, ब्याटिङ गर्दै
बर्डफ्लु प्रमाणित भएपछि संकटग्रस्त जनस्वास्थ्यको टोली
जन्मकैद सुनाइएका बालकृष्ण ढुंगेल जेलवाट छुट्दै
- कुश्माखर बस्याल
- सुमन मल्ल
- सुर्य बस्याल
- श्रृजना आचार्य
- जनक के.सी.
- सुमन कार्की
- के सी शेर
- दिपक क्षेत्रि
- रुद्र शर्मा (आचार्य)
- दिपक खड्का
- दिनेश खड्का
- विजय बस्याल
१५१४२ KPC १७५
विज्ञापनको लागि : 9851246220, 9860975774 [email protected]
© 2018 लाइट नेपाल मिडिया प्रा.लि.